Xiaomi Mi 5 Extreme Edition, tampon'ilay tampon-tampon'ny | Androidsis
Xiaomi Mi 5 Extreme Edition, ny tampon'ny tampon'ilay faritra
Raha nieritreritra ianao fa handeha hanao vakansy ny orinasa sinoa Xiaomi taorian'ny nanehoany ny sainam-baovao vaovao manaitra azy, dia tena diso hevitra ianao. Na dia Xiaomi Mi 5 aza izao dia iray amin'ireo finday avo lenta matanjaka indrindra sy tsara kalitao ary lafo indrindra eny an-tsena, nanapa-kevitra ireto Sinoa ireto fa mbola afaka mandeha lavitra kokoa.
Ary izao no fomba, tamin'ny alàlan'ny fahanginana tsy mihoatra ny fahendrena, dia nandefa fanontana manokana an'ny sainam-pireneny ankehitriny izy ireo. Ity terminal vaovao ity dia nahazo ny anarana hoe Xiaomi Mi 5 Fanontana Extreme. Izany dia mahery kokoa aza noho ny rahalahiny, mitazona vidiny mirakitra be izy io, ary efa azo raisina amin'ny alàlan'ireo mpivarotra iraisampirenena mahazatra.
1 Xiaomi dia mitsambikina avy amin'ny Mi 5 ka hatramin'ny Mi 5 Extreme Edition
1.1 Ny kinova "S" an'ny Xiaomi Mi 5
1.1.1 Endri-javatra amin'ilay fanontana Mi 5 Extreme vaovao
1.1.2 Vidiny sy misy
Xiaomi dia mitsambikina avy amin'ny Mi 5 ka hatramin'ny Mi 5 Extreme Edition
Tamin'ny volana febroary lasa teo, ilay goavambe sinoa Xiaomi nanaitra anay indray izy miaraka amin'ny fanavaozana ny smartphone voalohany. Taorinan'ny Mi 4, finday lafo vidy, tonga ny Xiaomi Mi 5, fitaovana tonga herintaona mahery taorian'ny teo alohany, saingy ny toetrany sy ny vidiny no nahatonga ny fiandrasana mendrika.
Tadidio fa ity Mi 5 ity dia nampidirina ho endri-javatra lehibe:
5,1 ″ efijery misy vahaolana feno HD
Qualcomm Snapdragon 820 2,1 GHz processeur
Fahatsiarovana RAM 3 na 4 GB miankina amin'ny maodely
16, 64 na 128 GB fitehirizana
Fakan-tsarimihetsika 16 megapixel ao aoriana miaraka amin'ny stabilizer sary sy flash roa
Fakan-tsary mialoha 6 megapixel
Batterie 3.030 mAh izay mampanantena fahaleovan-tena hatramin'ny roa andro
Rafitra famahanana haingana.
Mpamaky rantsantanana ultrasound
Rafitra fiasa Android 6.0 Marsmallow eo ambanin'ny sosona MIUI 7
Ary ny vidiny, toy ny mahazatra, tena voafehy, hatramin'ny € 300 ho an'ny maodely 16GB miaraka amin'ny RAM 3GB, ka hatramin'ny € 400 ho an'ny modely 128 GB sy 4GB an'ny RAM.
Ny kinova "S" an'ny Xiaomi Mi 5
Telo volana lasa izay, nilaza izany taminay izahay Xiaomi dia nieritreritra ny handefa kinova nohatsaraina, vao mainka aza raha azo atao, ny Mi 5 mahafinaritra. Io dia ho kinova "S" izay, farany, dia efa ao amin'ny katalaogin'ny orinasa, na dia manana anarana manokana aza.
Miresaka momba izany isika Xiaomi Mi 5 Fanontana Extreme, terminal vaovao voatendry ho tonga, miaraka amin'ny rahalahiny Mi 5, iray amin'ireo mpanjaka finday avo lenta eny an-tsena.
Ity fitaovana vaovao ity dia mahery kokoa noho ny fanontana navoaka tamin'ny volana febroary lasa teo, dia afaka mitazona izany fifandraisana misy kalitao tsara izany ary ny vidiny antonony izay mampiavaka ny orinasa be loatra. Ary tena tianay ny mpampiasa.
Endri-javatra amin'ilay fanontana Mi 5 Extreme vaovao
Tsy nisy fampandrenesana, mainka izany ny hetsika fampisehoana manokana. Ny Xiaomi Mi 5 Extreme Edition vaovao dia nampiana fotsiny amin'ny katalaogin'ny orinasa.
Mikasika ny endrika ivelany, tsy hahita fahasamihafana amin'ny maodely tany am-boalohany isika. Aza adino fa tsy smartphone vaovao amin'ny heviny hentitra izy io, na tsy kinova fanatsarana na manokana.
Ao amin'ny fizarana sary sy sary dia tsy mampiseho zava-baovao izany. Ary koa tazomy ilay efijery iray ihany, na amin'ny habeny na amin'ny famahana.
Raha ny motera izay mitantana ny rafitra iray manontolo, dia efa tafiditra ao anatin'io ny processeur iray ihany, puce Qualcomm Snapdragon 820. Ny maha samy hafa azy dia manana hafainganana famantaranandro 19% ambony noho ny maodely voalohanyl. Raha ny tena manokana, dia nandeha tamin'ny 1,8 GHz ka hatramin'ny 215 GHz. Nohatsaraina koa ny GPU manomboka amin'ny 510 MHz ka hatramin'ny 624 MHz.
Ny Xiaomi Mi 5 Extreme Edition koa ahitana RAM mitovy 3 GB ihany, fa navaozina avy amin'ny maodilo LPDDR4 1333 MHz ka mody hafa mitovitovy amin'ny 1866 MHz. Amin'izany rehetra izany dia matanjaka sy haingana be kokoa ilay fitaovana, izay hanatsara kokoa ny asan'ny multitasking.
Raha ny fizakan-tena dia io no "teboka malemy". Ny Mi 5 dia efa misy batterie 3.030 mAh tsara izay nitazona amin'ny fanontana Extreme. Fa izany dia ho ampy haharitra mandritra ny tontolo andro tsy misy fahasarotana.
Ny Xiaomi Mi 5 Extreme Edition dia misy amin'ny vavahady iraisampirenena izay efa fantatsika rehetra. Atolotra amin'ny famaranana efatra (mainty, fotsy, volomparasy sy volamena) ary ny vidiny dia manodidina ny 300 $. Iray farany! Ny vaovao ratsy dia ny fahafantaranao sahady fa amin'ny fanovana dia mazàna miakatra ireo vidiny ireo. Saingy, dia mendrika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Xiaomi Mi 5 Extreme Edition, ny tampon'ny tampon'ilay faritra
Izy io dia finday novain'ny kernel, saingy mitovy amin'ny voalohany. Tsy ofisialy avy amin'ny xiaomi izy io, amidin'ny mpivarotra tsy miankina iray izay afaka nanova azy io noho ny namoahan'i xiaomi ny loharano kernel ... Tokony hampifanohitra tsara kokoa ny vaovao ianao alohan'ny hamoahana azy tsy misy sivana. Ho fanampin'izay, ny zava-bita dia ny fanalana ny satroka izay entin'ireo 32Gb hamela azy hitovy amin'ny 64Gb…. Raha izany…
Valiny tamin'i Tony
Arotsaho io backhand mahery io ary avadiho ho toy ny raketa finday Ketchapp Tennis ny findainao